झाँक्रीलाई विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गरिनु निरंकुश हर्कत ! - kageshworikhabar.com
झाँक्रीलाई विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गरिनु निरंकुश हर्कत !
२९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड माधव समुहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यबिरुद्धको अपराधको दफा ५८ बमोजिमको पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर सो पार्टीका केन्द्रीय नेताद्धय योगेश भट्टराई र विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आपत्ति जनाएका छन् । विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा उनलाई पक्राउ गरिनु शाहीकाल र पञ्चायतकाल भन्दा पनि निरंकुश हर्कत गरिएको टिप्पणी नेताद्धयको छ ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आज फेसबुकमा एक प्रतिक्रिया लेख्दै राजतन्त्र भएको बेलामा “‘पम्फादेवीका नाममा रानी ऐश्वर्यले स्वीस बैंकमा पैसा राखेकी छन्’ भनेर सडकमा नारा लाग्दा कोही समातिएन । ‘राजा वीरेन्द्रको बंश विनाश ज्ञानेन्द्र र पारसले गरेका हुन्’ भनेर बोल्दा,लेख्दा कसैमाथि मुद्दा लगाएको सुनिएन ।” भनेका छन् ।
तर आज गणतन्त्रमा गणतन्त्रका लागि रगत बगाउने रामकुमारी झॉक्रीलाई ‘राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको’ अभियोगमा गिरफ्तार गरिएको छ । हेक्का रहोस् ! आफूले बसालेको नजीर कुनै दिन आफैंमाथि भारी नहोस् । नेता रिजालले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा नेता योगेश भट्टराईले रामकुमारीलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिने राष्ट्रपतिका आफ्ना भनिएकाहरुले नै राष्ट्रपतिलाई धुलिसाफ गर्ने भए भन्दै व्यङग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल टुवीटरमा प्रतिक्रिया दिदै उनले लेखेका छन् “राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमालाई गुटको स्वार्थमा कैद नगर । व्यक्तिगत रुपमा रामकुमारीलाई थप परिपक्व बनाउने छ र अझ स्थापित गर्नेछ । प्रहरी रामकुमारीको निवासबाट तत्काल फिर्ता होउ ।”
Previous articleफेरि विघटन भएमा के हुने : न्यायाधीश सिन्हा
Next articleजर्मनीमा मार्च ७ सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याइयो